शिक्षा/स्वास्थ Archives - Page2of 23 - Seven Nepal
शनिबार, चैत्र २२, २०७६ | Saturday, August 3, 2019
काठमाण्डौ, यदि तपाईंले हालसालै नोकरी सुरु गर्नुभएको छ भने तपाईका प्राथमिकताहरु बढ्दै जान्छन्, योसँगै खर्च पनि । धेरै मानिसलाई यस्तो हुन्छ कि सुरुवाती नोकरीबाट उसले प्राथमिकताहरु पूरा गर्न सक्दैन । यदि तपाईलाई पनि यस्तै समस्या भइरहेको छ भने चिन्ता लिन आवश्यक छैन । नोकरीपछि बचेको समयमा केही काम गरेर समेत तपाईं आरामसाथ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ । तर यसका लागि तपाईसँग मात्र अनलाइनमा काम गर्ने क्षमता हुन ...
दैनिक ५ घन्टा मोबाइल प्रयोग गर्दा क्यान्सर र डायबटिजको खतरा
काठमाण्डौ, हिजोआज युवापुस्तामा निकै तीव्रताका साथ मोबाइल फोनको क्रेज बढ्दै गएको छ । तर बढ्दो क्रेज उनीहरुको स्वास्थ्यका लागि निकै खतरनाक साबित भइरहेको छ । एकातिर मोबाइलले मानिसको जीवनी निकै सहज बनाइरहेको छ । अर्कोतर्फ हदभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगले स्वास्थ्यमा हुने साइड इफेक्ट्सहरुका घटनाहरु पनि आइरहेका छन् । विश्वमा अहिले मोबाइलको बढ्दो प्रयोग र यसबाट हुने सम्भावित घटनाहरुका बारेमा दिनह...
विषादी परीक्षण शुरू भएपछि तरकारी र फलफूलको आयातमा कमी
बीबीसी नेपाली सेवा, वीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगञ्ज नाका हुँदै नेपाल ल्याइने तरकारी र फलफूलको आयातमा कमी आएको त्यहाँका भन्सार कार्यालहरूले बताएका छन्। केही तरकारी र फलफूलमा विषादीको अवशेष हेर्न द्रुत जाँच गर्दा विषादीको मात्रा धेरै भेटिएकोले नेपाल आउनबाट रोकिएको बताइएको छ। भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा विषादीको अवशेषको जाँचको विषयलाई लिएर गत महिना सर्वसाधारण र सांसदहरू सरकारको आलोचनामा...
लोकप्रियता बढ्दै घरेलु प्याडको
मानव जीवनचक्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण पाटो महिनावारीलाई अझैसम्म पनि समाजमा लुकाउनुपर्ने विषयका रूपमा हेरिन्छ । महिनावारीका बेला पोसिलो खाना, घाम, तातोबाट वञ्चित हुँदा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमै प्रतिकूल असर पर्छ । अझ सरसफाइका लागि सफा प्याड आवश्यक हुन्छ र त्यो न्यून आय भएकाका लागि सुलभ बनाउने प्रयास थालिएको छ । महिनावारीबारे सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । एकैपटक...
छविले शिल्पासँग माफी मागे, भयो यस्तो सहमति
नायिका शिल्पा पोखरेलले श्रीमान् छवी ओझाविरूद्ध प्रहरीमा दिएको उजुरी छलफलबाट टुंगिएको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुमा भएको दुवै पक्षको छलफलपछि पोखरेल र ओझाबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यसअघि पाखरेलले श्रीमानबाट असुरक्षित भएको भन्दै शान्ति सुरक्षा माग गरेर उजुरी दिएकी थिइन् । परिसरका डीएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार पोखरेलको सुरक्षामा आँच नपुग्याउने गरी ओझाले लिखित सम्झौता गरेका छन् । त्यस...
बिहिबार, आषाढ २६, २०७६
कथा : डिभोर्स (पूरा पढ्नुस्)
प्रेमले बासना जन्माउँछ । बासनाले प्रेम जन्मिन्छ ? भत्काउँदै गरेको पर्खालमा घनले हिर्काएझै मेरो दिमागमा यिनै प्रश्नहरुले हिर्काइरहेका थिए । म कसरी भन्न सक्छु र यतिका वर्ष उसले मलाई प्रेम गर्‍यो । अनि मैले …? एकतर्फी सही, मैले त गरें नि उसलाई । उफ् …! कसरी सक्यो होला उसले मलाई बिर्सिएर बाँच्न ? बाहिर आकाश रोएर जमीन भिज्यो । भित्र म रोएर ओछ्यान । एकसाता भैसक्यो यो ओछ्यानमा ओर्कंदै-फर्कंदै बिताएको ...
आइतबार, आषाढ २२, २०७६
जापानमा रेलभित्रै नेपाली युवाको निधन
टोकियो - रोजगारीका लागि जापान आएका एक नेपाली युवाको निधन भएको छ । ३ वर्ष अगाडि यहाँ आएका बाग्लुङ गल्कोटका ४० वर्षीय भविलाल घर्तिको रेलभित्रै हृदयघात भएर मृत्यु भएको हो । शनिबार राती काम सकेर घर फर्कने बेलामा साईतामा केनमा रेलभित्रै उनी बेहोस भएका थिए । लगत्तै एम्बुलेन्समा राखेर अस्पताल पुर्याएपनि डाक्टरहरूले घर्तिलाई मृत घोषणा गरेको ग्लकोट समाज जापानका संस्थापक बेलुकाजी थापाले बताए । उनको मृत्यु...
सप्तरी - एचआइभी सङ्क्रमितमाथि समाजको दृष्टिकोण, लाञ्छना र भेदभावलाई समुदायस्तरबाटै न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। एचआइभी सङ्क्रमितमाथि हुने लाञ्छना तथा भेदभाव न्यूनीकरणका सम्बन्धमा आज राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा सरोकारवालासँग आयोजित अन्तक्र्रियामा जोड दिइएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको सहयोगमा उक्त अस्प...
रुपन्देही सामूहिक बलात्कारका मुख्य आरोपी दुई हप्तापछि पक्राउ
१५ असार - रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकामा गत असार २ गते राति भएको सामूहिक बलात्कारका मुख्य आरोपी विष्णु थारु चौधरी पक्राउ परेका छन् । गैडहवा गाउपालिका–८ का २२ वर्षीय थारु घटनाको दुई हप्तापछि रुपन्देहीकै सूर्यपुरा इलाकाबाट गएराति पक्राउ परेको इलाका प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शंकर पोखरेलले जानकारी दिए । चौधरीमाथि जबरजस्ती करणी कसुरमा मुद्दा चलाइने प्रहरी निरीक्षक पोखरेलले ब...
१५ असार, तनहुँ - जिल्लाको भानु नगरपालिका–३, खहरेका धनराज श्रेष्ठको घरमा भोज खाएका ४१ गाउँले बिरामी परेका छन् । श्रेष्ठको छोराको भात खुवाइको अवसरमा बिहीबार आयोजित भोजमा सहभागी गाउँले शनिबार एकैपटक बिरामी परेका हुन् । स्थानीयवासीले भोजमा माछा, कुखुराको मासु, केराउको तरकारी, सलादलगायत खाएका थिए । भानु नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष दलनारायण श्रेष्ठले माछा खाएका मात्रै बिरामी परेकाले माछामा कैफियत हुनसक्ने...